Messi wuxuu la tartamayaa saacada kulanka ugu horeeya La Liga - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Messi oo ku tartamaya saacada kulanka ugu horeeya La Liga
Messi ayaa la tartami kara saacada kulanka ugu horeeya La Liga
07: 01 IYO
Lionel Messi ayaa u tartamaya waqti si uu ugu soo baxo furitaanka La Liga ee ay la ciyaarayaan kooxda Athletic Bilbao jimcaha.
Messi ayaa kaligii tababaran arbacada, waxa uu la shaqeynayaa tababbaraha jimicsiga Juanjo Brau madaama uu weli ka soo kabsanayo dhaawac kubka ah.
- Goorma ayaa suuqa kala iibsiga
Waxa uu ku dhaawacmay kulankiisii ​​ugu horeysay ee isreebreebka Isniintii hore, waxaana uu seegay safarkii Mareykanka ee isbuucii hore.
Waa macquul in Messi uu si buuxda ugu soo laabto Tababaraha reer Argentine ma uusan ciyaarin shantii saaxiibtinimo ee Barca kumana qeyb gelin tartan tartan ah tan iyo Copa America.
Ernesto Valverde ayaa sheegay usbuucii hore inay "aad ugu adkaan laheyd" in Messi uu diyaar u noqdo orodka iyo garoonka.
Messi, kaasoo lahaa 32 xagaagan, ayaa ku dhaawacmay gumaarka qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii hore, tababarahana wuu ka caga jiidayaa inuu halis geliyo xiddigiisa.
Ciyaartan ayaa loo qorsheeyay kaliya bisha Agoosto 25, marka ay martigeliyaan Real Betis garoonka Camp Nou kulankooda ugu horreeya ee ololaha.
Kooxda heysata horyaalnimada Spain ayaa sifiican ugu qalabeysan inay wajahaan Messi. Shaqaale cusub Antoine Griezmann ayaa dhaliyay goolkiisii ​​ugu horeysay ee kooxda isbuucii hore kulankii ay guushii 4-0 ee ay ka gaareen Napoli waxaana uu si buuxda ula qaatay saaxiibadiisa cusub.
Luis Suarez et Ousmane Dembele oo sidoo kale goolal ka dhaliyay Napoli, ayay u badan tahay inuu wehelin doono weerarka Griezmann.
Dhanka kale, Barca ma qabato wax dhaawacyo kale ah oo walaac ah ka hor inta aysan jimcaha u bixin Koobka Basque. Frenkie de Jong iyo Jean-Clair Todibo dib u bilaabay tababarka Arbacadii ka dib markii uu ka fariistay kalfadhiga talaadada taxaddar.
De Jong, oo ay qortay Ajax oo loogu talagalay 75 milyan oo yuuro, ayaa rajeynaysa inuu safto kulankiisii ​​ugu horreeyay. loogu talagalay kooxda heysata horyaalka Spain.
Xiddiga reer Holland toddobaadkan wuxuu si gaar ah uga hadlay ESPN FC wuxuuna sharaxay sida ay aheyd in ay tababaraan tababarayaasha naadigu inta lagu gudajiro howsha si looga fogaado dhaawac.
waxyaabo badan baan u sameeyaa naftayda, goobta jimicsiga, iwm., laakiin xilliyada ka horeeya, waa inaad had iyo jeer taxaddar muujisaa, waa inaad taam ahaataa, ”ayuu yidhi.
Tababarayaasha waxaay dhahaan waa wax xoogaa qatar ah in la sameeyo. Kaliya waa inaan sabro oo sugaa ilaa iyo inta uu xilliku bilaabmayo, markaa waan awoodaa. Waxay dhahaan haddii kale waa lagu dhaawacmi karaa. "
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/barcelona/story/3920479/messi-in-race-against-time-for-la-liga-opener
Muuqaal ku saabsan shaqaaleysiinta cusub ee ugu wanaagsan ee horyaalka Spain